La xiriir Xarun WorkSource
Si aadu hesho cawimaad luuqadeed aan aheyn Ingiriisi, wac Khadka Helitaanka Luqadda ee WorkSource Oregon ee ah 833-685-0845.
Si aad u hesho wixii baahiyaha kale ee WorkSource ah, la xiriir xarunta WorkSource ee kuugu dhow.
Aalada jadwalkeena onleenka ah ayaa kuu igolaaneyso inaad la diyaarsatid balan Taqasuska Shaqada. Sidoo kale waad balansan kartaa waqti aad adeegsatid kumbuyuutarka WSO si aad u abuurtid ama u cusbooneysiisid siifiiga, gudbisid arjiyada onleenka, ama sameysid howlaha raadinta shaqada kale.
La xiriir xaruntaada WSO haddii aad u baahantahay caawin lagu balansanayo balantaada.
Shaqaalaha WorkSource Oregon ayaa kugu caawin karo sheegashada shaqo la'aanta. Wixii warbixinta shaqo la'aanta, booqo unemployment.oregon.gov or call 877-345-3484.